कञ्चनपुरमा १७ वर्षीय युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार ! - Everest Dainik - News from Nepal
कञ्चनपुरमा १७ वर्षीय युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार !
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–९ नौखरीकी १७ वर्षिय युवतीलाई सामुहिक बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले २ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार पक्राउ पर्नेमा शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ का १९ बर्षिय धिरेन्द्र थापा र सोही ठाउँकै भुपेस ऐर रहेका छन् । उनीहरुलाई इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीको टोलीले शनिबार पक्राउ गरेको हो । युवतीलाई जबरजस्ती करणी गर्ने दुई जनालाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीका प्रहरी निरीक्षक नैनसिंह साउँदले बताए
याे पनि पढ्नुस १३ वर्षीया बालिकाको सामूहिक बलात्कारको आरोपमा ७ पक्राउ
उनका अनुसार घटनामा ५ जनाको संलग्नता थियो । ‘घटनामा संलग्न अन्य तीन जनाको खोजी भइरहेको छ,’ उनले भने,‘पक्राउ परेका व्यक्तिको साथबाट एक मोटरसाईकल र एक खुकुरी समेत बरामद गरेका छौं ।’ युवतीको स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्य परिक्षण रिर्पोटमा बलत्कार भएको देखिएको छ । पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान भइरहेकोे प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेका उनिहरुलाई आइतबार जिल्ला अदालतमा पेश गरिने छ ।
याे पनि पढ्नुस किशोरी बलात्कार आरोपमा इन्जिनियर पक्राउ
News source: janasarokarpost
ट्याग्स: gang rape, बलात्कार